GINNY နှင့် GEORGIA က INSTAGRAM ကိုလွှင့်ထုတ်ခဲ့သည်။ NETFLIX ကြယ်များသည်တကယ့်ဘဝ၌ကဲ့သို့ဖြစ်သည် - သတင်း
Netflix ရဲ့နောက်ဆုံးသရုပ်ဆောင်ကဘာလဲသင်နှင့်အတူစွဲလမ်းသွားပြီးဘာကြောင့် Ginny နှင့် Georgia ဇာတ်ကောင်များကိုပြသတာလဲ။ ဒီမှာအချက်မှ skip ကြပါစို့, Ginny နှင့်ဂျော်ဂျီယာသွန်းသင်နှင့်အတူအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်ချင်သောလူမျိုးနှင့်ပြည့်ဝ၏, ဒါကြောင့်သင်သိသာအားလုံးသူတို့ရဲ့ Instagram ကိုတစ် ဦး အညှာရှိသည်သွားတာပေါ့။
ငါတို့အားလုံးကချစ်ကြတဲ့လူငယ်တွေ၊ ဆယ်ကျော်သက်ဇာတ်ကောင်တွေတောင်မဟုတ်ဘူး။ ငါတကယ်တော့ဂျော်ဂျီယာ, Ellen, ဂျိုးနှင့်ပေါလုနှင့်အတူ pals ဖြစ်ကိုချစ်ချင်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ မည်သူမဆို Austin နှင့်အတူ messed လျှင်, ငါအဖြစ်ကောင်းစွာအတွက်ခြေလှမ်းချင်ပါတယ်။ ယခုအားဖြင့်သင်ဖြစ်ကောင်းဖို့ပဟေtakenိခေါ်ဆောင်သွားပါတယ် သင်မည်သည့်ဇာတ်ကောင်ဖြစ်ကြောင်းကိုရှာဖွေပါ အကယ် သငျသညျပိုပြီး Ginny သို့မဟုတ်ဂျော်ဂျီယာပါပဲ သငျသညျချိန်းတွေ့တက်အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ပြပွဲကနေ, နှင့်အရာကောင်လေး, ဒါကြောင့်ယခုအစစ်အမှန်ဘဝ၌ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုသိရန်အချိန်ရောက်ပြီ။
ဤတွင် Ginny နှင့်ဂျော်ဂျီယာသွန်း၏ Instagram ကိုအားလုံးဖြစ်ကြသည်။ အောက်ပါရယူပါ !!
Brianne Howey - ဂျော်ဂျီယာ Miller
Georgia Miller ကိုအသက် ၃၁ နှစ်အရွယ် Brianne Howey ကတီးခတ်သည်။ Instagram တွင်သူမသည်ထင်ရှားသောဂျော်ဂျီယာမှထွက်ခွာသွားသောအချို့သူများတွင်ရိုက်ချက်များအပါအ ၀ င်သူမသရုပ်ဆောင်များနှင့်အတူနောက်ကွယ်မှရုပ်ပုံများကိုတင်ခဲ့သည်။
သူ၏စေ့စပ်ထားသူ Matt Ziering နှင့်အတူဓာတ်ပုံများစွာတင်သည်။ လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကထိုစုံတွဲသည်ကူးစက်ရောဂါကြောင့်သူတို့၏လက်ထပ်ပွဲကိုရွှေ့ဆိုင်းရန်ကြေငြာခဲ့သည်။ သူတို့သည်လွန်ခဲ့သောငါးနှစ်ခန့်ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့သည့်နှစ်အောက်တိုဘာလတွင်လက်ထပ်ရန်စီစဉ်ခဲ့ကြသည်။ ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေစဉ်အတွင်းသူတို့အစားခွေးပေါက်စတယ်, သူသည်သူမချစ်စရာကောင်းပါတယ်အလွန်မျှတသော Insta, ပေါ်တွင် lil pup pup တွေအများကြီးဝေမျှ။
မင်း Antonia Gentry နဲ့မရင်းနှီးချင်ဘူးဆိုရင်သူမရဲ့ Instagram ပရိုဖိုင်ပေါ်မှာရှိနေပြီးနောက်မှာသင်ဟာအမှန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၂၃ နှစ်အရွယ်မှာပျော်စရာကောင်းတဲ့ကောင်မလေးရဲ့အရည်အချင်းတွေရှိတယ်။ သူမ၏ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံသည်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပြီးသူမသည်အမြဲတမ်းသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူချိတ်ဆွဲကာအကောင်းဆုံးဘဝနေထိုင်ခဲ့သည်။ ငါသူမ၏ PAL ဖြစ်ဘယ်မှာလျှောက်ထားကြသနည်း
သူမ၏ Instagram ဇီဝကသူမသည်ကြောင်များ၊ စာအုပ်များနှင့်အစားအစာများကိုနှစ်သက်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဂျင်နီနှင့်ဂျော်ဂျီယာလူမျိုးတို့၏ Instagram မှထွက်ပြီး Antonia သည်ဒုတိယအမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။
ဒီဇယ် La Torraca - Austin Miller
သငျသညျပြင်းထန်သောရုတ်တရက်အလွန်အကျွံဝန်အဘို့ပြင်ဆင်ထားနေလျှင်, ဒီဇယ်, La Torraca ရဲ့ Instagram ကိုထွက်စစ်ဆေးပါ။ သူ Ginny နှင့် Georgia တွင် Austin ကစားသော 10 နှစ်အရွယ်သရုပ်ဆောင်ဖြစ်သည်။ ငါပဲမိမိအဓာတ်ပုံများကိုဘယ်လောက်ကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောအဘို့အဆင်သင့်မဟုတ်ခဲ့, ရိုးရိုးသားသားဖြစ်လိမ့်မယ်။ အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးပေါ်လွင်ချက်များတွင်သူသည်မြို့တော်ဝန်ပေါလ်နှင့် BTS နှင့်သြစတြေးလျရှိအိမ်တွင်ကျောင်း၏ရုပ်ပုံနောက်ကျောပါဝင်သည်။ ဒီတစ်ခါလည်းငါငိုတယ်။
Felix Mallard - မားကတ်စ်
နောက်လိုက်များ - ၁.၉ သန်း
အိုး၊ မင်းမာ့ကပ်စ်ကိုလိုချင်လား။ အဲဒီလို့ဘာဖြစ်လို့? Felix Mallard, သူ့ကိုကစားသူသရုပ်ဆောင်, အမှန်တကယ်ဘဝ၌ရှာဖွေနေအတော်လေးကွဲပြားခြားနားသည်။ အသက် ၂၂ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သောAustralianစတြေးလျလူမျိုး (ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့ထံမှထိုဝဲကိုသူဝှက်ထားခဲ့သည်) သည်ဆံပင်ရှည်။ surfing နှင့်ဓာတ်ပုံကိုနှစ်သက်သည်။
အကောင်းတစ်ဦး DiC pic ကိုယူဖို့ဘယ်လို
ဂျင်နီနှင့်ဂျော်ဂျီယာလူမျိုးများသည် Instagram ကိုချန်လှပ်ထားသူများတွင်သူသည်နောက်လိုက်အများဆုံးဖြစ်ပြီး ၂ သန်းမျှသာရှိသည်။ ငါသူတို့ရံဖန်ရံခါ dreamy selfie အဘို့အားလုံးရှိနေရေတွက်ပြီး။
မင်းရဲ့မျက်နှာသာပေးတဲ့ Ginny နဲ့ Georgia ဇာတ်ကောင်ကဘယ်သူလဲ။ Max ကဘာလို့လဲ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်သူ့ကိုချစ်ကြသည်, Sara ကိုအစစ်အမှန်ဘဝ၌ပင်ပျော်စရာကောင်းသည်။ ချစ်စရာကောင်းသော selfies များအကြားတွင်သူမ၏ Instagram သည်သူမ၏မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ၏ဓါတ်ပုံများဖြစ်သည်။ သူမနှင့် Antonia Gentry တို့၏ပုံတစ်ပုံကသူမကိုသူမအတွက်ထာဝရကျေးဇူးတင်တတ်သည့်သူမ၏အမွှေးအကြိုင်ကိုသူမ၏အမွှေးအကြိုင်ဟုခေါ်ဆိုသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ပျော်ရွှင်စွာအိပ်ပျော်သွားနိုင်ပြီးသူတို့အားလုံးသည်အစစ်အမှန်ဘဝ၌အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဂျနီဖာ Robertson က - Ellen
ငါတို့ရှိသမျှသည်ပိုပြီး Ellen အကြောင်းအရာချင်, မုသာမသုံးပါနှင့်။ ၄၉ နှစ်အရွယ်ဂျနီဖာရောဘတ်ဆန်သည်ကနေဒါမင်းသမီးနှင့်စာရေးဆရာဖြစ်သည်။ သူမ၏ Instagram သည်သင်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းအတိအကျဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်လူမှုမီဒီယာအတွက်အလွန်ခက်ခဲသည်။
ကျွန်းသြစတြေးလျရာသီ 1 စုံတွဲများကိုချစ်
Scott ပေါ်တာ - ပေါလု
PSA: Paul နှင့် Joe တို့သည်စစ်မှန်သောဘ ၀ တွင်နေထိုင်ကြသည်။ ငါထပ်ခါတလဲလဲ, ပေါလ်နှင့် Joe အစစ်အမှန်ဘဝ၌။ အသက် ၄၁ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Scott Porter ကသူနဲ့ Raymond Black တို့ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးရေခဲဟော်ကီကစားပွဲမှာအတူတူကစားသွားမှာပါ။
သူ၏ Instagram ဇီဝဗေဒတွင်သူသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စာရင်းစစ်၊ ဘီဘော့ဘ်ကာ၊ ကစားသမား၊ ဂစ်နှင့်အားကစားလောကတွင်အချိန်ပြည့်ပါဝင်သည်၊ သူနှင့်သူ့ဇနီးနှင့်ကလေးနှစ်ယောက်တို့၏ရုပ်ပုံများစွာတင်သည်။
ရေမွန်က Black - ဂျိုး
Raymond Black သည်သူ၏ Instagram အခန်းကဏ္ acting မှဓာတ်ပုံများကိုတင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ဂျိုးအားကစားသောယောက်ျားအတွက်နာမည်ကြီးသည့်သူနှင့်သူ၏မိသားစု၏အဓိကအားဖြင့်အကျိုးပြုသောပုံများဖြစ်သည်။ သူ့ပုံတွေတော်တော်များများကသူ့ညီမနဲ့တူတယ်၊ သူက lil နည်းနည်းပဲလိုချင်တယ်ဆိုတာသိလိမ့်မယ်၊ အဲဒါ Ginny နဲ့ Georgia က Padma ပဲ။
နေသန် Mitchell က - ဇိအုန်တောင်
နေသန် Mitchell က @itsnatemitchell မှမျှဝေသည်
ဇိအုန်၌ကစားသောနေသန် Mitchell ကိုသင်အဘယ်ကြောင့်လိုက်ချင်သည်ကိုကျွန်ုပ်ရိုးရိုးသားသားမသိပါ။ သုည။ သဲလွန်စမရှိပါ။ မင်းသိသင့်တာကဟုတ်တယ်၊ ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ပုံတွေရှိတယ်။ အသက် ၃၂ ​​နှစ်ရှိပြီဖြစ်သောသရုပ်ဆောင်သည်ကနေဒါနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးအမေဇုံတိုင်းမ်ဗီဒီယိုစီးရီးတွင် Black Noir အဖြစ်လူသိများသည်။
ချယ်လ်ဆီးကလပ် - နိုရာ
Chelsea Clark ၏ Instagram အကျဉ်းချုပ်: HUJI နှင့်စပျစ်သီးစစ်ထုတ်ခြင်းများ။ သူမခရီးထွက်တာ၊ အများကြီး ကော်ဖီ အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်ရှိသူသည်မနုropဗေဒပညာကိုလေ့လာနေသည့်တက္ကသိုလ်မှဖြစ်သည် အင်တာဗျူးတွင်ဖော်ပြထားသည် အမြဲတမ်းသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူတိုရွန်တိုရဲ့အအေးဆုံးကော်ဖီဆိုင်ကိုတက်နှိပ်အဖြစ်။
Mason ဘုရားကျောင်း - Hunter
Hunter ကစားသူ Mason Temple တွင် Ginny နှင့် Georgia နယ်မြေတစ်ခုလုံး၏သက်တမ်းအရင့်ဆုံးသော Instagram တစ်ခုရှိသည်။ သူဟာဓာတ်ပုံရိုက်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးထိုင်ဝမ်မှာရှိတဲ့သူ့မိသားစုကိုဓါတ်ပုံရိုက်တာကိုနှစ်သက်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရိုက်ကူးတာကိုနှစ်သက်တယ်။ သူဟာသောကြာနေ့ဗီဒီယိုများကိုသင်တောင်းခံနိုင်တယ်လို့သူကသူ့ Cameo ပရိုဖိုင်းကိုလင့်ခ်လုပ်ဖို့သူ့ဇီဝကိုအဆင့်မြှင့်လိုက်တဲ့အတွက်သူဟာတောင်းဆိုမှုတွေအများကြီးရခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲကနေဘယ်တော့မှမရဘူး
Nikki Roumel - ဂျော်ဂျီယာလူငယ်
Michael Jackson ရဲ့အိမ်ခြံမြေပိုင်ဆိုင်မှု 2016
Ginny နှင့် Georgia တွင် Nikki Roumel သည်ငယ်ရွယ်သောဂျော်ဂျီယာကိုသူငယ်စဉ်တုန်းကပေါ့။ အစစ်အမှန်ဘဝ၌, အသက် 20 နှစ်အရွယ်စိတ်အားထက်သန်ခရီးသွားဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်ဥရောပတစ်ဝှမ်းလုံးရှိပီရူး၊ မော်ရိုကိုနှင့်အမေရိကတစ်လွှားတွင်မိမိကိုယ်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်သည်။ သူမ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိကသူမအားကျွန်ုပ်၏နောက်စွန့်စားခန်းအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသောလှည့်လည်သူအဖြစ်ဖော်ပြသည်။
ထုတ်ဝေသည့်အချိန်တွင်အားလုံးနောက်လိုက်အရေအတွက်မှန်ကန်သောခဲ့ကြသည်။ ဂျင်နီနှင့်ဂျော်ဂျီယာတို့ကိုယခု Netflix တွင်ရနိုင်သည်။ ဘို့ နောက်ဆုံးပေါ် Netflix ကသတင်းများ၊ ပြန်လည်ပေါက်ကွဲမှုများ၊ Facebook ပေါ်မှာ Netflix ၏သန့်ရှင်းသောဘုရားကျောင်းလိုပဲ။
• Netflix ရှိ Ginny နှင့် Georgia မှမည်သည့်ယောက်ျားသည်သင်နှင့်အဆုံးသတ်ရမည်ကိုရှာရန်ဤပဟေquိမေးခွန်းကိုဖြေဆိုပါ
• ဤရွေ့ကား 35 Ginny နှင့်ဂျော်ဂျီယာ memes သူတို့ Hunter ကိုထိပုတ်ပါကခုန်ရရှိပါသည်ဤမျှလောက်ကောင်းလှ၏
• မင်းကပို Ginny လားဂျော်ဂျီယာလား။ ထွက်ရှာတွေ့မှဤပဟေိကိုယူပါ